ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, June 11, 2007
အနမ်းတွေနေရာကို အလွမ်းတွေက အစားဝင်တယ်..။ အပြုံးတွေနေရာကို အရှုံးတွေက အစားဝင်တယ် ... ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ကျွန်တော်ကအပြုံးတုတွေကြားမှာ အတုံးအရုံးကျဆုံးတယ်။ တဲ့လား ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကျဆုံးဖူးပါရဲ့ ကိုဇင်ကိုလတ် အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ ကြိုက်သမျှစာသားသော ထုတ်ပြရမယ်ဆိုရင် ... အကုန်ပဲဗျ။ ကျွန်တော်ဒါမျိုးမရေးတတ်ဘူး။ အရမ်းကြိုက်တယ်။
ငါလဲ ဒါမျိုးနောက်တစ်ခါထပ်ရေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ မသေချာတော့ဘူး ကိုဖြိုးရေ ...။ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
သူမပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အချုပ်အနှောင်ကင်းတဲ့ချစ်ခြင်းတွေကိုတမ်းတတယ်...။ ရုန်းထွက်ဖို့ခက်တဲ့ဒြပ်မဲ့အကာအရံတွေကြားမှာ ပိတ်လှောင်မွန်းကြပ်မိတဲ့အခါတိုင်း အရာအားလုံးကိုမေ့ပျောက်စေတဲ့ သူမရဲ့ရင်ခွင်ကို လွမ်းတယ်...။ သူမ ပေးနိုင်တော့မှာ မသေချာပေမယ့် ကျွန်တော် အားလုံးကို ပြန်လိုချင်နေခဲ့တာကတော့ သိပ်ကိုသေချာပါတယ်...။
မိုးမခမှာ ထင်တယ်ဗျာ။ ဖတ်လိုက်ရဖူးတယ်။ မြန်မာဘလော့ဂါတွေအတွက် အချစ်ဆိုတာ ရှားပါးပစ္စည်းတဲ့။ ဒီတခါဆိုရင် သူတို့ကို ဒီဝတ္ထုလေး အဖတ်ခိုင်းလို့ရပြီ။ စကားမစပ်ပြောရရင် `ကျွန်တော် လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်´ လို့ ဘလော့ဂ် နာမည်ပေးထားရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို အခုမှ သိရတယ်ဗျာ။ :)
ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်ထဲကစကားလုံးတွေကို အခုလိုအားပေးကြတဲ့အတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ ... ခင်ဗျာ။
အင်းလွတ်ခဲ့တဲ့မြို့ဆိုတာ ဒါကြောင့် ဖြစ်လာတာကိုး
လွတ်ကျသွားတာ ခံလိုက်ရတဲ့ မြို့တော်လေး ကျိုးပဲ့ ကြေမွ ထိခိုက် ပွန်းရှမှု မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်
Totto Chan said...
အရမ်းသဘောကျပါတယ်။ စာသားတွေက အရမ်းကောင်းတာပဲ။ ရင်တွင်းခံစားချက်မို့လို့ထင်တယ်။
Ye' Minn Ko said...
အကို့"ကျွန်တော်လွှတ်ချခဲ့တဲ့မြို့တော်"ဘလော့ဂ်ကိုfacebookပေါ်မှာShare ခွင့်ပြုပါ လား ကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျလို.ပါ ။
ဒီမှာကတော့ ခေါင်းစဉ်က လွှတ်ချခဲ့တဲ့မြို့တော် ဖြစ်နေတယ်။ စာအုပ်ထဲမှက လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်တဲ့။ ပြောင်းလိုက်တာလား??
ဒီနေ့ပဲ ကိုနေဘုန်းလတ်ရဲ့ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာအုပ်လေးကို သူငယ်ချင်း ဇာရည် ဆီကနေ လက်ဆောင်ရခဲ့တယ် ... အခု စာအုပ်ကိုဖတ်ပြိး ဒီဘလော့ကို ပြန်လာဖတ်ဖြစ်တယ်... အရမ်းကြိုက်တယ် .. ကျွန်တော့်စိတ်ထင် ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလို မြို့လေး တစ်ခုကို လွှတ်ချခဲ့ဖူးတယ် ကျွန်တော် လွတ်ကျခဲ့တာလို့ မထင်ဘူး ..ကျွန်တော် လွှတ်ချခဲ့မိတာ ... အဲဒီတည်းမှာ အကြိုက်ဆုံးက " ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တော်လေးမှာ ... အလှဆုံးဆိုတဲ့ပန်းတွေသာ ဝေေ၀ဆာဆာကို ဖူးပွင့်ကြိုင်လှိုင်ခဲ့တာပါ...။
ကျွန်တော့်ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော် ညင်ညင်သာသာ ကျဆုံးခဲ့ချိန်ပေါ့...။ ကျွန်တော့်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကအာသာဆန္ဒတွေနောက်ကို လိုက်တယ်...။ ကျွန်တော့်ရဲ့အာရုံတွေက ပြင်းထန်လွန်ကဲတဲ့ ရမ္မက်တွေရှိရာကို ရောက်တယ် ...။ အနီးဆုံးမှာရှိနေတဲ့သူမကို ကျောခိုင်းပြီး မာယာတွေအပြိုင်းအရိုင်းထနေတဲ့ လောကထဲကို ကျွန်တော် အရိုင်းအစိုင်း တစ်ယောက်လို ၀င်တိုးမိခဲ့တယ်။
သူမမကြားချင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဝေး.. ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းက ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ထဲကိုပြုတ်ကျလာတယ်...။
အနမ်းတွေနေရာကို အလွမ်းတွေက အစားဝင်တယ်..။
အပြုံးတွေနေရာကို အရှုံးတွေက အစားဝင်တယ် ... အဲဒီလို ... အဲဒီလိုနဲ့ ... ဝေးခဲ့ကြတယ်...။
ကျွန်တော်ဟာ ... ငြိမ်းချမ်းအေးမြတဲ့မြို့တော်လေးတစ်ခုကို လွှတ်ချမိခဲ့တဲ့ကောင်ပါ...။
ကျွန်တော် လွှတ်ချထားခဲ့တဲ့ မြို့တော်လေးရဲ့တံခါးဝမှာ ... ချစ်ခြင်းတွေပြည့်သိပ်နေတဲ့ရင်ခွင်တစ်ခုနဲ့ သူမကျွန်တော့်ကိုမျှော်နေမှာလား ...။
ဒါမှမဟုတ်... မြို့တော်လေးရဲ့ တံခါးကိုပိတ် ... အတိတ်တွေအားလုံးကို ဘေးနားမှာချိတ်ထားပြီး ... သူမတစ်ယောက်တည်း နူးညံ့တိတ်ဆိတ် နေမှာလား...။
ဒါမှမဟုတ် ... မြို့တော်လေးရဲ့ ... အရေခွံဟောင်းတွေကိုခွာချ ... အသစ်အသစ်သောရင်ခုန်သံအပိုင်းအစတွေနဲ့ ... မြို့တော်အသစ်တစ်ခုကို သူမတည်ဆောက်စပြုနေပြီလား...။
ကျွန်တော့်ဘ၀တစ်ခုလုံးစာအတွက် သိပ်ကိုသေချာတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို သူမကြားမှာမဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်...။ ကျွန်တော် သူမကိုသိပ်ချစ်တယ်...။ ( ကျွန်တော် သူမကို သိပ်ချစ်ခဲ့ပါတယ် )
( ၅.၀၂.၀၆ )" ကျွန်တော့် ဖေ့ဘွတ်မှာ ရှယ်ထားတယ် ကိုနေဘုန်းလတ် ...စာတွေ အများကြိး ရေးနိုင်ပါစေ .... ပျော်ရွှင်ပါစေ
အစ်ကို့စာတွေကို ဖတ်ရင် ဒီမြို့တော်လေးကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ဖတ်ချင်နေမိတယ် ???